Ex Madaxwayne Xasan Sheekh oo Ka Hadlay Qaddiyadda Badda Somaliya | Baligubadlemedia.com
Ex Madaxwayne Xasan Sheekh oo Ka Hadlay Qaddiyadda Badda Somaliya
Intii aan talada dalka haynay, qadiyadani waxay soo martay marxalado badan oo ku billowday in wadahadal lagu dayo, ayna ku soo dhammaato in aan la tiigsanno maxkamadda cadaaladda ee caalamiga ee Hague bishii August 2014.
Waxaannu ku bixinnay maskax badan, dadaal badan, hanti badan iyo in dadka Soomaaliyeed fahmaan qadiyadan in la mariyo xeerarka caalamiga ah. Waxaannu isu keenay talada iyo maskaxda hoggaankii dowladda oo ay kamid ahaayeen guddoonka Barlamaanka iyo Golaha wasiirada. Waxaannu garwadeen uga dhignay Qareen Soomaaliyeed oo heer Caalami ah Garyaqaan Muno Sharmaan inay hoggaamiso Qareennada caalamiga ah ee difaacaya qadiyadda baddeenna. Waxaannu u xilsaarnay Safiirkii inoo fadhiyay Midowga Yurub Amb Cali Fiqi, inuu si dhow ula socdo maamulka maxkamadda, Waxaannu u xilsaarnay in Xeerilaaliyaha Guud ee Qaranka Garyaqaan Axmed Cali Daahir oo si khaas ah dhammaan hay’adaha dowladda uu masuul uga noqdo dowladda, warbixino joogto ahna uu siiyo golaha wasiirada, golaha barlamaanka iyo dadweynaha Soomaaliyeed.
Ilaa iyo habeenkii ay dhacaysay doorashadii 8 Febraayo 2017, waxaan la kulmayay cadaadis, rajo gelin iyo caga juglayn. Anigoo ka dhabeynayo dhaartii aan Allaha weyn kitaabkiisa ku maray, waxaan ummadda Soomaaliyeed soo hor istaagay marar badan si ay kuwa baddeenna damaca ka hayo ugu caddaato in mowqifkaygu aanu ka noqosho lahayn. Si ay qaddiyadani ugu daahfurnaato waxaan xoogga saarnay intii aan talada hayay in fadhiyada maxkamadda ay ka qaybgalaan matalayaasha bulshada Rayidka ah, qurbo joogta iyo saxafiyiinta Soomaaliyeed. Waxay inoo ahayd qadiyadda QARAN iyo dhaxal ay wada leeyihiin shacabka Soomaaliyeed. Waxaan marar badan wargelin jiray madaxda dowlad goboleedyada iyo maamulka Somaliland oo dhammaantood na wada garab Taagnaa
In kiiska dacwadda la geeyo maxkamadda caalamiga ah ma ahayn colaad annaga iyo dariskeenna na dhextaallo, ee waa dariiq ay maraan dowladaha caalamka. Qadiyadahan oo kale waxay dhexmaraan dowlado deris ah oo kaliya. Waxaannu xiriir saaxiibtinnimo la lahayn dowladda Kenya iyo Madaxeeynaheeda Uhuru Kenyatta. Waxuu nagu sharfay inuu ka mid ahaa madaxweynayaashii soo noqday dalkeenna xilli duruufaheennu adag yihiin, waxay nagu garab istaageen la dagaallanka argagixisada, naguna garab siiyeen maxfallo badan oo caalami ah.
Intii aan howshaa wadnay, waxaa nasiib darro ahayd in madaxda talada hayso badankooda ay saldhig Ka dhigteen dalal shisheeye iyagoo kula showrayay in haddeey talada dalka qabtaan ay maxkamadda caalamiga ah kala soo laaban doonaan qaddiyadan. Waxay ku raadinayeen taageero, qaarkoodna waxay ku galeen ballamo. Waxaan ka xumahay inaan sheego in sedexdii sano ee la soo dhaafay ay maalin kasta soo muuqanaysay in dayac weyn uu ka jiro habka ay dowladdeenna u maareeynayso qaddiyadda. Waxaan isku daynay inaan garab istaag u muujinno madaxda talada hayso markii aan dareenno in cadaadis haysan karo amaba ay tallaabo dhiirigelin mudan qaataan Inkatha oo marne aaney xog na siin. Waxaan ka xumahay in sedexdii sano ee la soo dhaafay ay dhaceen waxyaabaha soo socdo:
Waxaan shacabka Soomaaliyeed u ballan qaaday anoo talada dalka haya in qaddiyada baddeenna ay tahay lama taabtaan. Inaan u taagnaan doono difaaceeda, si sharciga waafaqsan, haddii aan xilka hayo iyo haddaanan haynba. Anigoo dareemaya dayaca ay madaxda talada haysa ku samaynayaan qaddiyadani waxaan ku baqayaa: